SPHC Pickled DD11 Isticmaalka ganacsi Xaashida saxan birta lagu duubay oo kulul oo loogu talagalay qaybaha mashiinka qotada dheer
DD11 waa kaarboon aad u hooseeya, oo ah xaashida biraha oo duuban oo si aad ah loogu isticmaalo qabowga ku samaysmaya xaaladda qalalan ama la shiiday iyo saliid. Maaddadu waxay leedahay tayo alxanka wanaagsan waxayna ku habboon tahay codsiyada guud ee sameynta. DD12, DD13 iyo DD14 waxay tilmaamayaan xitaa heerarka kiimikada iyo farsamooyinka oo ka dhigaya kuwo ku habboon sawir qoto dheer, sawir qoto dheer oo dheeri ah iyo saxaafad aad u adag.
Qalabka birta ee HR sida DD11, SPHC, SPHD, STW22, S315MC, S420MC waxaa inta badan loo adeegsadaa substrates kala duwan waxaana si weyn loogu adeegsadaa soo saarista baabuurta, qaybaha qabow qabow iyo qaybaha dhismaha, iwm.
A283 A285 Saxanka birta duuban ee kulul oo la duubay saxan bir ah A36
A283 Birta Fasalka C waxaa iska leh bir -dhismeedka kaarboon. Taabashada saxanka birta ee A283 ee Darajada C waa mid hooseysa ama mid hooseysa. Saxanka birta ee A283 Fasalka C waxaa lagu keenaa xaalad duuban. RuiYi waxay bixisaa taayirrada birta A283 ee Darajada C oo duuban ilaa 220mm.
Qeybta: Carbon Structural Steel
Darajada Birta: Darajada C
Heerka: ASTM A283
La heli karo: taargooyin, guryo ballaadhan, strips, qaybaha iyo baararka
Saxanka birta ee Fasalka C283 waxaa lagu bixin karaa +AR, +N, ama +M xaalad.
Caadaynta duubista (+N): hannaanka duudduubka kaas oo uur -ku -taallada ugu dambeysa lagu fulinayo heer heer -kulmeed gaar ah oo u horseedaya xaalad maadi u dhiganta tan la helay ka dib markii caadi laga dhigay si qiimayaasha la cayimay ee guryaha farsamooyinka loo hayo xitaa ka dib caadadii.
Sida la-duubay (+AR): xaaladda dhalmada iyada oo aan lahayn wax rogaal khaas ah iyo/ama kuleylka kuleylka ah.
Duubista farsamada-kulul (+M): Geedi-socodka duudduubka kaas oo ku-beddelkii ugu dambeeyay lagu fuliyay heer-kul heer cayiman oo u horseedaya xaalad maaddadeed oo leh astaamo gaar ah oo aan lagu gaari karin ama lagu celin karin daaweynta kuleylka oo keliya.
A283 Birta Darajada C waxaa lagu farsamayn karaa hawlgallo caadi ah sida goynta, shiidi iyo alxanka.
A283 Gr C bir waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu dhiso warshado, munaaradda gudbinta awoodda danab sare, Buundooyinka, baabuurta, foornada kululeeyaha, weelasha, maraakiibta, iwm, sidoo kale aad bay u yar yihiin oo loo isticmaalo shuruudaha waxqabadka ee qaybaha farsamada.
Xaashida aluminiumka anodized waa badeecad bir ah oo ka kooban aluminium oo ka samaysmay habsocodka dheef-shiid kiimikaad kaas oo ka bixiya dusha adag ee adag ee xidhashada adag. Lakabka difaaca ee ay samaysay habsocodka anodizing -ku dhab ahaantii waxyar buu ka badan yahay kor u qaadista lakabka oksaydhka dabiiciga ah oo si dabiici ah uga jira dusha aluminiumka.
Daawaha: 1050, 1060, 1085, 1100, 3003
Ballaca: 1000 mm- 2300 mm
Dhumucdiis: 0.1 mm-6.0 mm
Dekedda Dajinta: Qingdao / Shanghai
Shahaadada: ISO9001: 2015
1050 Muraayadda Muraayadda Sare ee Aluminiumka anodized leh
Xaashida muraayadda Aluminium waxaa loola jeedaa saxan aluminium oo lagu farsameeyo habab kala duwan sida rogid iyo shiidi si dusha sare ee saxanku u muujiyo saamayn muraayad. Guud ahaan, saxanka aluminiumka duuban ayaa loo adeegsadaa xaashida muraayadda Aluminium ee dalalka shisheeye si loo soo saaro maaddada gariiradda iyo alaabta xaashida ah.
Xaashida muraayadda Aluminiumka ayaa si weyn loo isticmaalaa. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa iftiiminta laambadaha iftiiminta iyo qurxinta laambadda, kuleylka ururinta qoraxda qalabka milicsiga, qurxinta dhismaha gudaha, qurxinta derbiga dibedda, darbiyada qalabka guriga, qolofka alaabta elektiroonigga ah, kushiinnada alaabta guriga, gudaha baabuurta iyo qurxinta bannaanka, calaamadaha, calaamadaha, boorsooyinka, sanduuqyada dahabka Iyo beeraha kale